Tui na luhlobo unyango noluqhathayo Chinese rhoqo ukusetyenziswa kudibaniso nge imithi, moxibustion, cupping umlilo, herbalism Chinese, T'ai chi, kwaye qigong.Tui na ke izandla-on unyango emzimbeni esebenzisa imigaqo Chinese taoist bezama bazise imigaqo ezisibhozo Chinese Traditional Medicine (TCM) kwawo. Le Ingcali unakho uqabe, ocoliweyo, ukujika, cinezela, kwaye tipakani iindawo phakathi ngamnye namalungu, eyaziwa ngokuba emasangweni ezisibhozo, ukuzama ukuvula chi ukuzithethelela yomzimba (Wei Qi) kwaye ufumane amandla ihamba kwi esiqu kunye nemisipha . Techniques babe nokuthantamisa okanye kakhulu ngokuqinileyo. Igama livela ezimbini iintshukumo: ". Ukuphakamisa ezo 'kuthetha tui' akathi" kunye na indlela Ezinye imivimbo ziquka behlunguzela kunye tapotement. Weprakthishina sebenzisa ngoko uluhlu sesindululo, imoto, kunye nokukhuthaza kwindawo ezithile. Ezi ubuchule ayabangwa ekuncedeni unyango zombini iimeko musculoskeletal etsolo kwaye ezingapheliyo, kwakunye ezininzi conditions.As non-musculoskeletal kunye nezinye izenzo ezininzi yemveli Chinese zonyango, kukho izikolo ezahlukeneyo ayahluka indlela yabo ingqeqesho. Le ezinxulumene ukuba umyalezo Japanese okanye anma.
E China yamandulo, unyango zonyango wayesoloko zihlelwa nokuba "lwangaphandle" okanye "yangaphakathi" unyango. Tui na wayengomnye iindlela yangaphandle, wacinga ukuba alungele ngakumbi ukusetyenziswa inani labemi abadala kunye nabantwana. NakwelaseTshayina kule mihla sikuyo, izibhedlele emininzi iquka tui na njengomba esemgangathweni unyango.
Tui na ngandlela enkulu umhlaza nokunyanga, scleroderma, yoma dystrophy, rheumatism, isifo neuron iimoto, udinwe, isifo seswekile, nephropathy, kunye nezinye iintlobo zezifo ezingapheliyo kunye namatyala kakhulu.